Soosaarka Noodle ee Shiinaha Glass iyo Warshad | Ruisheng
Khudaarta la engejiyey ee fuuqbaxay
Baasto Vermicelli ah
100% Khudaarta isku dhafan ee Dhir Dabiiciga ah / Qalalan ee AD
Cawska Shaciir ee fuuqbaxay
Malaysia Vegan Mala Basbaaska & Noodleyaasha dhalada ah
STEVIOL GLYCOSIDES SOO SAARKA (SG) 90%
Xaydho Toonta Fuuq Baxday
Karootada Fuuq-baxa ah ee fuuqbaxay
SIDEE LOO CUNA?
MAGACA SOO SAARKA & Sawirrada:
Baradho Macaan Noodle / Vermicelli
SHARAXAADA SOO SAARKA:
Baradho Macaan Vermicelli, oo sidoo kale loo yaqaanno baradhada macaan ee Vermicelli iyo baastada, waa takhasus takhasus dhaqameed leh taariikh ka badan 400 sano. Baradhada macaan ee vermicelli ma xuma ka dib markii la kariyo waqti dheer. Waa udgoon iyo dhadhan fiican, waxayna leedahay habab kala duwan oo wax loo cuno. Waa nooc ka mid ah waxyaabaha cuntada lagu sameeyo iyadoo loo isticmaalayo baradhada macaan sida alaabta ceeriin oo kale iyadoo lagu tiirsan yahay istaarijka ku jira baradhada macaan. Waxay hodan ku tahay fiber-ka cuntada, hodan ku ah macdanta potassium.
Baradho Macaan Vermicelli waa cunno aad u fudud oo socda. Waxaa lagu waafajin karaa cuntooyin badan waxaana loo karin karaa siyaabo kala duwan si loogu sameeyo suxuun kala duwan oo leh hilib qabow iyo kulul iyo khudrad, la shiilay oo la kariyey.
Zhengwen Brand Brand Baradho Glass Noodle / Vermicelli,100% maaddooyinka istaarijka baradhada macaan, waxay si adag ula jaanqaadaysaa HACCP Maareynta iyo Nidaamka Xakamaynta. Waa Cunnooyin Cagaaran, Caafimaad qaba, Fudud oo deg-deg ah Cunto Casri ah oo ku habboon dadka.
Vermicelli wuxuu hodan ku yahay karbohaydraytyada, fiber-ka cuntada, borotiinka, niacin, kaalshiyamka, magnesium, iron, potassium, fosfooraska, sodium iyo macdano kale;
Vermicelli wuxuu leeyahay dhadhan fiican, wuxuu dhuuqi karaa dhadhanka maraqyo kala duwan oo macaan, vermicelli laftiisuna waa jilicsan yahay oo siman yahay, taasoo ka dhigaysa mid soo cusbooneysiisa oo raaxo leh. Vermicelli cagaaran ee dhabta ah wuxuu leeyahay inta badan howlaha caafimaadka ee baradhada macaan.
Sidoo kale waa walax ay shiineysku karsadaan markay cunayaan dheriga kulul guriga iyo makhaayadaha labadaba, Basbaaska, Macaan, Udgoon, Subag iyo Saliid Laakiin Dhirbaaxo Maahan. Waa Cunno Caan ah & Cunto Dabiici ah oo waliba si gooni ah ayaa loogu diyaarin karaa si fudud loo qaado, waxaad ku raaxeysan kartaa cunnada macaan meel kasta oo aad jeceshahay.
Jirka iyo kiimikada, MICROBIOLOGICAL ASSAY:
Qoyaanka ≦ 14.0%
Wadarta Tirada Tirada, CFU / g n = 5 ， c = 2 ， m = 104 ， M = 105
Foomamka Coli, CFU / g n = 5 ， c = 2 ， m = 10 ， M = 102
Salmonella 25 / g Taban
Staphylococcus aureus, CFU / g Taban
Arsenic （gudaha AS） ， mg / kg Taban
Xadka tirada ： 0.040mg / kg）
XIRIIRKA & SOO SAARIDDA:
1KG halkii Kiish, 20 Kiish halkii kartoon
Raridda Weelka: 3.5 MT / 20GP FCL, 2.5 CBM; 7 MT / 40GP FCL, 5CBM
Sumadda xirmada waxaa ka mid ah: Magaca Badeecada, Lambarka wax soo saarka, Dufcad / tiro badan, Miisaanka guud, Miisaanka saafiga ah, Taariikhda Prod, Taariikhda uu dhacayo, iyo Xaaladaha Kaydinta
Waa in lagu shaabadeeyaa oo lagu kaydiyaa santuuqa, oo ka durugsan gidaarka iyo dhulka, hoosta Xaaladda Nadiif ah, Qalalan, Qabow iyo Hawo leh, Ka fogow heerkulka sare iyo qorraxda tooska ah.
36 Bilood laga soo bilaabo taariikhda wax soo saarka iyada oo la raacayo xaaladaha kaydinta lagu taliyay. Taariikhda Soo-Saarka: Waxaa lagu calaamadeeyay Hoosta Koobka.
Hore: Chongqing Basbaas dhanaan Vermicelli
Xiga: Muraayad Noodle oo loogu talagalay Supermarket
Hordhac kooban oo ku saabsan Vermicelli / Noodle Muraayad dhakhso leh
Muraayadaha Kulul ee Noodle Vermicelli, basbaas leh, cusub, udgoon, dhanaan iyo saliid laakiin aan dufan lahayn! Waa cunno cagaaran oo dabiici ah. Budada ugu weyn waxaa lagu qasaa baradho macaan iyo digir sida ugu wanaagsan, kadibna waxaa sameeya beeralayda oo ay la socdaan shaqooyin dhaqameed. Basbaaska kulul ee Noodle Vermicelli sidoo kale leh nooca cuntada ee ku habboon.
Baastada macaan iyo dhanaan waxay ka soo bilaabatay cuntada dad-weynaha ee Sichuan. Baastada macaan iyo dhanaan waxaa gacanta ku dhigay dadka deegaanka. Dhadhanka waxaa loo magacaabay ka dib markii uu muujiyey dhadhanka dhadhanka iyo basbaaska leh ka dibna noqday mid caan ah oo gaar ah oo aan caadi ahayn loo cuno iyo cunto.
Seddex Talaabo oo loogu raaxeysto Cunnada Macaan
Fur Daboolka, Ku dar Vermicelli iyo Xilliga (Khamriga mooyee) Koobka ama Bowl;
Ku shub biyo karkaraya illaa Qadka Mashiinka Lagu durayo, Daboolka Dhow, oo isku kari ilaa 5 daqiiqo;
Fur Daboolka, Ku dar Khamri ka dibna Si fiican u walaaq oo Ku raaxee Vermicelli Dhadhan.
Baakad khamri ah ayaa lagu daray iyadoo loo eegayo dhadhanka shakhsi ahaaneed
Qiimaha Tixraaca Nafaqada (NRV)%
Nacnac galaas dhanaan oo basbaas leh
Digaag Digaag noodle galaas dhanaan basbaas
Baasto Koob Koob Koob ah
Baastada Koobka Khudradda Khudaarta Degdega ah leh
Koobka Khudaarta Khudaarta Khudaarta ah ee Nuudleyda ah
Koobka Khudaarta Khudaarta Khudaarta ah ee Noodleyda ah ee dhadhanka leh
Baastada dhalada ah isla markiiba
Baastada dhalada ah ee dhalada ku jirta
Baastada kulul ee dhanaan ee Dhakhso ah
Baastada Khudradda Khudaarta Degdega ah ku jirta
Noodleyaasha dhadhanka kulul ee dhalada ah ee ku jira Dambiisha
Noodleyaasha dhalada ah ee dhadhanka kulul ee dhalada ah oo leh Suugada ku jirta bacda
Baastada Kuuriya Kuuriya
Baasto Baasto leh oo Baaskiil Kuuriya ah
Baasto Kuuriya Kuuriya oo basbaas leh
Baradho Macaan Noodle Kalori
Baasto Baaskiil dhadhan uyeelay
Baastada Khudradda Khudradda
100% Dabiici Dabiici / Qallalan AD Gawaarida AD
SERIES GLUCOSYL STEVIOL GLYCOSIDE GSG 90%
Mala Beef Basbaaska iyo Soor Vermicelli
Baradho la jarjaray, L - Phenylalanine (PHE), Taurine, Budada Karootada qalalan, Karootada qalalan Jumlada, Vermicelli,